Ungakhubaza njani ukulayishwa okuzenzekelayo kweMifanekiso kwiGmail | Iindaba zeGajethi
Ungakukhubaza njani ukulayishwa okuzenzekelayo kwemifanekiso kwiGmail
Umbulali weviniga | | software
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo uGoogle ude wathumela ingxelo kubo bonke abasebenzisi bayo iklayenti lemeyile ye-Gmail, ebhengeza ukuba imigaqo-nkqubo kunye nemigaqo emitsha xa kuboniswa imifanekiso eyinxalenye yomzimba womyalezo we-imeyile, ziya kulayishwa (ziboniswe okanye ziboniswe) ngokuzenzekelayo; le meko ikukuthanda nokuthanda abanye abantu nangona, kwabanye, bambalwa, imifanekiso kwiGmail Kuya kufuneka zilayishwe ngokokuthanda nganye okanye imfuno nganye.
Kule nqaku siza kubonisa eyona ndlela ifanelekileyo yokukwazi ukubuyisela kulungelelwaniso lwangaphambili apho kuboniswe namhlanje, oko kukuthi, ukuba umsebenzisi achaze ukuba ufuna imifanekiso kwiGmail zilayishwe (zibonisiwe) ngokuzenzekelayo okanye hayi, zifuna amanyathelo nje ambalwa kunye namaqhinga okwamkela ngaphandle kokusebenzisa izicelo zomntu wesithathu.
1 Kutheni le nto kufuneka ndicime ukugcwaliswa kwemifanekiso ngokuzenzekelayo kwi-Gmail?
2 Ndilufumana njani useto lwangaphambili lwemifanekiso kwiGmail?
Kutheni le nto kufuneka ndicime ukugcwaliswa kwemifanekiso ngokuzenzekelayo kwi-Gmail?
Zininzi iimpumelelo kunye neempazamo kulo mbandela, into ekufuneka siyazi ngokuthembeka ukuze siyenze isigqibo sokuba yintoni imifanekiso kwiGmail kufuneka ivele ngokuzenzekelayo, kwaye engafanelekanga; Ukulungiselela le njongo siza kunika umzekelo omncinci, esiwubeke njengomfanekiso obhalwe apha ngezantsi.
Kuyo siya kuba nethuba lokuncoma imifanekiso ethile eyinxalenye yelogo yeziko; Inoxanduva lokuthumela unxibelelwano kubo bonke abathengi bayo kunye nabahlobo, apho ngokubanzi iingcebiso ezimbalwa zokhuseleko zihlala zinikezelwa malunga noko bafanele bakwenze nangaliphi na ixesha.
Ngoku, kubantu abaninzi le meko inokuba yingozi okanye ingonwabisi (kuxhomekeke kwindlela umntu ngamnye ayithatha ngayo), kuba eminye yale mifanekiso inokuba nayo uhlobo oluthile lwekhowudi yokulandela umkhondo; ukuba le meko izakuvela ngale ndlela, ngalo lonke ixesha umsebenzisi evula i-imeyile kwaye ejonge imifanekiso ecetywayo apho, abo babathumileyo banokufumana ulwazi olubalulekileyo ngathi, njengedilesi ye-ip kunye neminye imiba embalwa.
Enye imeko yokuhlalutya ikule ndawo ifumaneka kuyo le mifanekiso; Nangona benokubonakala emzimbeni womyalezo we-imeyile yethu ye-Gmail, ngokwenyani zifumaneka kwizicaka zalowo uzithumileyo; Kulapho enye inkalo yokhuseleko kunye nemfihlo inokuza khona, kuba ngobuchule obukhethekileyo, nabani na othumela iifoto okanye imifanekiso nge-imeyile angabanakho ukuqokelela ii-cookies kwisikhangeli sethu, esinokubamba ulwazi olubaluleke kakhulu ukuba lusincede kwaye lusenzakalise .
Kungenxa yesi sizathu, ukuba ngaphambili ezi zinto zazingaboniswa imifanekiso kwiGmailUmsebenzisi inguye othathe isigqibo sokuba angavela okanye hayi ngaphakathi komzimba womyalezo.
Ndizifumana njani kwakhona izicwangciso zangaphambili ze imifanekiso kwiGmail?
Ngokufanelekileyo, UGoogle akalususanga ukhetho lokufumana kwakhona kuseto lwangaphambili; Ngamanye amagama, ngamanyathelo ambalwa kunye namaqhinga amancinci siya kuba nethuba lokuphatha ukulayishwa okuzenzekelayo okanye hayi, kwezi imifanekiso kwiGmailInto esinokuyincoma ukuba usebenzise la manyathelo alandelayo:
Sivula esinye isikhangeli se-Intanethi.
Sifaka i-imeyile yethu ye-imeyile eneempawu ezifanelekileyo.
Sisingise kwivili elincinci legesi elisekunene.
Ukusuka apho sikhetha «Cwangcisa«.
Ngoku siya kuzifumana sikwi «ngokubanzi«.
Skrolela ezantsi de sifumane indawo ye «Imifanekiso«.
Khetha ukhetho "Buza ngaphambi kokubonisa imifanekiso yangaphandle" isebenze ibhokisi efanelekileyo.
Siya ezantsi kwesikrini ukuya «Gcina Utshintsho«.
Ngala manyathelo alula esiwakhankanyileyo, besingavula nayiphi na i-imeyile kwibhokisi yethu engenayo ukwenza uvavanyo, kufuneka sikhethe leyo inemifanekiso yangaphandle eqhotyoshelweyo.
Siya kuba nakho ukuqaphela ukuba ePhezulu kukhetho ebesikade silubona ngaphambiliOko kukuthi, i-Gmail iyasibuza ukuba sifuna ukubona imifanekiso eza nomyalezo.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Beka imifanekiso kwisiginesha yakho ye-imeyile kwiGmail, Ngaba ukhona umntu olanda ii-imeyile zethu?,
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ungakukhubaza njani ukulayishwa okuzenzekelayo kwemifanekiso kwiGmail
Ukumamela umculo ongasemva kwiWindows ngeAtmosphere Lite
Indlela yokuthatha izikrini kwi-Windows 8.1